Posted by Tranquillus | Jul 1, 2021 | Shabakada
Dhowr jeer ayay dowladu dib u dhigtay sababo la xiriira dhibaatada caafimaad, dib u habaynta caymiska shaqo la'aanta ayaa dhaqan galay maanta. Saddex horumar oo waaweyn ayaa dhacaya: gunno-malus ah shirkadaha ka kooban toddobada qaybood, xeerar cusub oo ku saabsan shuruudaha u qalmidda caymiska shaqo la'aanta iyo hoos u dhaca lacagta shaqo la'aanta ee dakhliga ugu badan.
Gunno-malus wuxuu ahaa ballan qaad olole ah oo ka yimid Madaxweynaha Jamhuuriyadda. Laga bilaabo maanta, waxay khuseysaa shirkadaha ka kooban toddobo waaxood macaamiisha culus ee qandaraasyada gaagaaban:
Soo saarida cuntada, cabitaanka iyo tubaakada;
Soo saarista iyo qeybinta biyaha, fayadhowrka, maareynta qashinka iyo xakamaynta wasakhda;
Hawlo kale oo khaas ah, saynis iyo farsamo;
Hoyga iyo cuntada;
Gaadiidka iyo keydinta;
Soo saarista waxsoosaarka caagga iyo balaastigga iyo waxsoosaarka kale ee aan macdanta ahayn;
Alwaaxa, warshadaha waraaqaha iyo daabacaadda.
Qeybahan waxaa lagu xushay iyadoo la cabirayo, muddadii u dhaxeysay Janaayo 1, 2017 iyo Disember 31, 2019, celcelis ahaan kala-soociddooda, Tilmaame u dhigma tirada dhamaadka heshiiska shaqada ama shaqooyinka ku meelgaarka ah ee shaqada oo ay la socoto diiwaangelinta shirkadda Pôle Emploi ee la xiriirta shaqaalaha shirkadda.
Caymiska shaqo la'aanta: dib-u-habeynta ayaa dhaqan galaysa Julaay 1, 2021 Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Ururinta Xisaabta: 3- Tirooyinka isku dhafan
horeSidee loo joojiyaa turjumaada madaxaaga? - Ku fikirida luqad kale [VIDEO]
socdaJulaay 2, 2021 Wareysiyo xirfadlayaal ah ayaa laqaban karaa ilaa Sebtember 30, 2021 Qiimaynta xirfadlayaasha ama wareysiyada alaabada, kuwaas oo waajibaadka loo shaqeeyaha oo aan dhici karin kahor 30/06 / 2021, waxaa laqaban karaa ilaa 30/09 / 2021.